Mwanakomana Wemunhu Achaonekwa | Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray
Mwanakomana Wemunhu Achaonekwa
UMAMBO HURI PAKATI PAVO
ZVINHU ZVICHANGE ZVAKAITA SEI JESU PAACHAONEKWA?
Jesu anofanira kunge achiri muSamariya kana kuti muGarireya. VaFarisi vanomubvunza nezvekuuya kweUmambo, uko kwavanofunga kuti chichava chiitiko chemakuwerere chinoshamisira. Asi iye anoti: “Umambo hwaMwari hahuuyi huchinyatsocherechedzwa, uye vanhu vanenge vasingati, ‘Onai kuno!’ kana kuti, ‘Uko!’ Nokuti, tarirai! umambo hwaMwari huri pakati penyu.”—Ruka 17:20, 21.
Vamwe vanogona kufunga kuti Jesu ari kuti Umambo huri kutonga mumwoyo yevashumiri vaMwari. Asi izvozvo hazvingadaro nokuti Umambo hausi mumwoyo yevaFarisi vaari kutaura navo. Asi huri pakati pavo pakuti Jesu uyo akasarudzwa kuti ave Mambo weUmambo hwaMwari, aripo pakati pavo.—Mateu 21:5.
Jesu anoudza vadzidzi vake mamwe mashoko nezvekuuya kweUmambo. Zvichida anoita izvi vaFarisi vaenda. Achitaura nezvekuvapo kwake musimba reUmambo, anotanga nekuvanyevera kuti: “Mazuva achauya pamuchada kuona rimwe remazuva oMwanakomana womunhu asi hamuzorioni.” (Ruka 17:22) Jesu ari kuratidza kuti kutonga kweMwanakomana wemunhu muUmambo kuchaitika mune ramangwana. Nguva iyoyo isati yasvika, vamwe vadzidzi vachahutsvaka nemaziso matsvuku asi vachafanira kumirira kusvikira nguva yakataurwa naMwari kuti Mwanakomana wemunhu achauya yasvika.
Jesu anoenderera mberi achiti: “Vanhu vachati kwamuri, ‘Onai uko!’ kana kuti, ‘Onai pano!’ Musabuda kana kuvatevera. Nokuti semheni, nokupenya kwayo, inovhenekera kubva kune rumwe rutivi rwepasi pedenga kusvikira kune rumwe rutivi rwepasi pedenga, ndizvo zvichaita Mwanakomana womunhu.” (Ruka 17:23, 24) Chii chichabatsira vadzidzi kuti vasatevere vanamesiya vekunyepedzera? Jesu anotaura kuti kuuya kwaMesiya chaiye kuchange kwakaita semheni inooneka kusvika kure. Uchapupu hunoratidza kuti avapo musimba reUmambo huchanyatsoonekwa nevanhu vose vanonyatsocherechedza.
Jesu anobva afananidza vanhu vachange vachirarama mazuva iwayo nevamwe vanhu vakararama kare achiti: “Sezvazvakaita mumazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo mumazuva oMwanakomana womunhu . . . Saizvozvowo, sezvazvakaita mumazuva aRoti: vaidya, vainwa, vaitenga, vaitengesa, vaidyara, uye vaivaka. Asi pazuva rakabuda Roti muSodhoma kwakanaya moto nesarufa zvichibva kudenga zvikavaparadza vose. Zvichavawo saizvozvo pazuva iroro pacharatidzwa Mwanakomana womunhu.”—Ruka 17:26-30.
Jesu haasi kuti vanhu vemumazuva aNoa neaRoti vakaparadzwa nekuti vaiita zvinhu zvinongoitwa muupenyu zvakadai sekudya, kunwa, kutenga, kutengesa, kudyara uye kuvaka. Noa naRoti nemhuri dzavo vaitoitawo zvimwe zvezvinhu izvozvo. Asi vamwe vanhu vakanga vachizviita vasingafunge nezvekuda kwaMwari uye vasingacherechedzi kuti nguva yavaperera. Saka Jesu ari kukurudzira vadzidzi vake kuti vashingaire kuita kuda kwaMwari. Nekuita izvi, ari kuvaratidza kuti vangachengetedzwa sei kuti varambe vari vapenyu pachaparadzwa nyika naMwari mune ramangwana.
Vadzidzi havafaniri kuzokanganiswa nekuisa pfungwa dzavo ‘pazvinhu zvavakasiya,’ kureva zvinhu zviri munyika. Jesu anoti: “Pazuva iroro munhu ari pamusoro peimba asi aine zvinhu zvake zvinotakurika zviri mumba ngaarege kuburuka kuti azvitore, uye saizvozvo munhu ari kumunda, ngaarege kudzokera kuzvinhu zvakasara. Yeukai mudzimai waRoti.” (Ruka 17:31, 32) Akava shongwe yemunyu.
Achienderera mberi nekutsanangura zvichange zvichiitika Mwanakomana wemunhu paachange ava kutonga saMambo, Jesu anoudza vadzidzi vake kuti: “Usiku ihwohwo varume vaviri vachange vari pamubhedha mumwe chete; mumwe achaendwa naye, asi mumwe achasiyiwa.” (Ruka 17:34) Saka vamwe vachaponeswa asi vamwe vachasiyiwa vorasikirwa neupenyu hwavo.
Vadzidzi vanobvunza kuti: “Kupi, Ishe?” Jesu anopindura kuti: “Pane mutumbi, ndipo pachaunganawo makondo.” (Ruka 17:37) Vamwe vachange vakaita semakondo ayo anoona zviri kure. Vadzidzi ava vachaungana kuna Kristu, Mwanakomana wemunhu. Pamazuva iwayo ari mberi, Jesu achapa vadzidzi vake vane kutenda chokwadi chinopa upenyu.
Umambo huri pakati pevaFarisi pakudii?
Kuvapo kwaKristu kwakafanana papi nemheni?
Nei vadzidzi vaJesu vachifanira kugara vakangwarira pachauya Mwanakomana wemunhu?
Umambo hwaMwari Huri Mumwoyo Mako Here?
Bhaibheri rinorevei parinoti “umambo hwaMwari huri mamuri”?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwanakomana Wemunhu Achaonekwa